Usoro zuru oke nke usoro BIM - Geofumadas
Mee, 2019 AulaGEO
N'ime usoro mmụta dị elu a, m na-egosi gị nzọụkwụ site na nzọụkwụ otu esi etinye usoro BIM n'ọrụ na oru na otu. Gụnyere modulu mmụta ebe ị ga - arụ ọrụ na ezigbo ọrụ site na iji mmemme Autodesk iji mepụta ụdị bara uru bara uru, ime ụdị 4D, mepụta atụmatụ echiche, mepụta usoro ịgbakọ ọnụ maka atụmatụ ọnụahịa ma jiri Revit na ọdụ data mpụga maka Njikwa. nke akụrụngwa.
Mmụta a bụ otu ihe ọtụtụ ndị Nna-ukwu nke Njikwa Nhazi BIM, nke ọnụ ahịa ya bụ ihe dị ka USD3000 na USD5000, mana, kama itinye ego maka ego ahụ, ị ​​nwere ike nweta otu ihe ọmụma maka obere nke ego ahụ. Site na usoro ndị ọzọ Revit na Robot, ị ga-enyocha BIM zuru oke. Cheta na BIM abughi mmemme, o bu usoro oru na-adabere na teknụzụ ohuru. Onweghi onye n’agwa gị nke a na ị nwere ike chee na iji mara BIM naanị ị ga - achọ ịma etu esi eme ihe nlere na Revit. Mana nke a bụ ụgha, ọ bụ ya mere na ọtụtụ anaghị enweta nsonaazụ ndị a tụrụ anya na agbanyeghị itinye ọtụtụ puku dollar na ọzụzụ na ngwanrọ.
Site na nkuzi a, ị ga - amụta iji BIM mee ihe niile ndụ, nke ị na - arụ ọrụ na mmega ahụ bara uru ma duzie gị.
Mee usoro BIM na oru na otu
Jiri mmemme BIM maka njikwa oru ngo
Mepụta ụdị dị mma nke na-anọchi anya ọnọdụ na-ewuli elu
Mepụta simulations na 4D nke usoro iwu ihe owuwu
Mepụta usoro echiche nke usoro mmalite nke ọrụ a
Mepụta igwe metrik sitere na echiche dị adị
Mepụta usoro metrik zuru ezu site na ụdị BIM
Jiri Revit maka njikwa ihe na njikwa mgbochi
Jikọọ Revit na ọdụ data mpụga
Ihe omuma banyere nke Revit
Kọmputa nwere Revit na Naviswork
Isnye bụ ihe ọmụmụ a?
BIM onye nlere na ndi di egwu
Ndi njikwa oru
Previous Post«Previous Nzukọ Space Space nke 2019 - Ejiri nke Ọma na China-Day Space
Next Post Bentley Systems na-ekwuputa na OpenSite Designer ugbu aNext »